नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, शेयर लगानीकर्ता उत्साही - Jyotinews
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, शेयर लगानीकर्ता उत्साही
ज्योतिन्यूज २०७७ भदौ ७ गते १७:१६
काठमाडौँ, ७ भदौ (रासस) :
कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी हुँदा दैनिक जीवन कष्टकर भएपनि धितोपत्र बजारमा भने नकारात्मक असर परेको देखिएन । अधिकांश लगानीकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाटै शेयर कारोबार गरेका कारण धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै १३ अङ्कले बढेको नेप्सेले जनाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १२.७७ बिन्दुले बढेर एक हजार ४१०.३४ मा पुगेको छ । यस्तै कारोबार पनि आज रु. एक अर्ब माथि भएको छ ।
शेयर बजारमा पहिरो जाने क्रम रोकिएन, कस्ले गुमाए बढी ?
लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न गणपतिले बोलायो १७ पुसमा साधारणसभा
बुधबार थपिए २८० संक्रमित, २ को मृत्यु